Toeram-piantsonan'ny Hill Station Tour North East India. Antsoy + 91-993.702.7574 ho an'ny famandrihana
Toeram-piantsonan'ny Hill Station Tour North East India
Raha tia ny natiora ianao ary te hiaina tanety feno hantsana sy lemaka misy rakotra maitso matevina, ny North East India Hill Station Tour dia ho anao. Ny lisitr'ireo fanjakana 7 dia antsoina koa hoe 'Land of Seven Sisters' North East India dia fihetsika mahavariana ho an'ny karazan'olona rehetra. Ny Sand Pebbles dia manolotra ny fiaran-dalambon'i North East India amin'ny vidiny tsara indrindra. Ahitana ny ala maitso tsara indrindra, monastera fahiny, tendrombohitra feno lanezy, lohasaha mainty, farihy mangatsiaka, ary riandrano mitandavana, any atsimo atsinanana
Heverin'i India ho toy ny any Wonderland ianao. Ny havoanan'i Station Hill any avaratra atsinanan'i India dia mety ho fantatry ny mpandeha rehetra. Manana firaiketam-po azy manokana izy io izay hamafa anao amin'ny tongotrao! Ny fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka any avaratra atsinanan'i India dia feno havoana malaza, ahi-maitso izay manalavitra an'arivony tapitrisa ny zavamaniry sy ny biby. Tokony hanomana fitsangatsanganana mankany amin'ny faritra avaratr'i East East ianao noho io traikefa nahafinaritra io.
Ny fanjakana any amin'ny faritra rehetra any avaratra atsinanan'i Inde dia manana hatsaran-tarehy voajanahary sy mahatalanjona mirakitra zava-mahatalanjona maro izay mamela ny mpizahatany rehetra ho afa-baraka sy ankafizina. Mba hahazoana antoka fa manana ny traikefa tsara indrindra ianao any amin'ny faritra avaratr'i India, miomàna tsara fa manana mpiara-dia aminy ianao Sand Pebbles, izay miezaka manome ny tsara indrindra amin'ny zava-drehetra. Manolotra ny tsara indrindra amin'ny India Tours Pakistana India Avaratra izahay.
Ny fonosana Station Station amin'ny fialan-tsasatra isam-bolana no tsara indrindra amin'ny antony rehetra izay mandalo ny sainareo raha mpandeha lavitra be na tsotra fotsiny izay te-hipetraka, miala sasatra ary mankafy ny tontolo majika. Ny fifampiraharahana dia mitondra olona akaiky kokoa rehefa mijery ny zavatra miaraka. Mankanesa manao ny fialan-tsasatry ny nofinofinao amin'ny dia mahavariana ny Sand Pebbles any amin'ny faritra Atsinanan'ny Tendrombohitra Atsinanana.
Programan'ny 09 Nights
Programan'ny 03 Nights
Programan'ny 07 Nights
Programan'ny 05 Nights